Tim Cook wuxuu sii wadi doonaa inuu sharad ku sameeyo telecommuting ka dib faafida cudurka Waxaan ka socdaa mac
Tim Cook, oo ah agaasimaha guud ee mid ka mid ah shirkadaha adduunka ugu guulaha badan ee soo gala dakhliga soo gala, ayaa muujiya muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta telefonku xitaa markii la ciribtiray aafada. Tirooyinku waxay u dammaanad qaadayaan Tim iyo shirkaddiisa (iyo kuwa kale oo badanba) inay sii wadaan maciishadda shaqo isku dhafan oo udhaxeysa fool-ka-fool iyo guriga. Hawlo badan ayaa laga soo xaadiri karaa masaafo ka fog xafiiska, in kasta oo waji-ka-waji had iyo jeer ay muhiim u tahay howlaha kale. Apple wuxuu sii wadi doonaa inuu sharad ku sameeyo shaqada fog.
In kasta oo uu jiro aafada baabi’ineysa malaayiin naf iyo shaqooyin ah adduunka oo dhan. In kasta oo ganacsiyadii musalafay oo ay ahayd inay albaabada u laabaan, Apple wali waxay sii wadaa diiwaangelinta guulaha. Caqli ahaan maahan wax maalin ama sanad ah. Wuxuu guranayaa wixii uu tobanaan sano kudayay. Xilligan Apple waa shirkadda 1-aad ee shirkaddeeda qaybteeda leh faa'iidooyinka cajiib ah iyo lambarro fadeexado leh oo qaarkood.
Soo bandhigida natiijooyinka rubuca labaad, Apple wuxuu ku xusay taageerada tirooyinka sii kordhaya markale, taasi telework waa mustaqbalka iyo inay timid meel dhexe oo masiibo ah, laakiin ay u timid inay sii dhaafto. Xitaa haddii sharciyada la dejiyo, tirooyinka infekshannada hoos ayey u dhacaan oo faafa wuu dhammaadaa, ka shaqeynta guriga waxaa lagu caddeeyey inay faa'iido leedahay oo waxay sii ahaan doontaa qodob lagu tixgeliyo.
Markuu cudurkan faafa dhammaado, shirkado badan ayaa sii shaqeyn doona hab isku dhafan. Ka shaqeynta guriga ayaa sii ahaan doonta mid aad muhiim u ah.
Sida wax walba, ka shaqaynta guriga ayaa leh faa'iidooyinka iyo khasaaraha. Waqtigan xaadirka ah waxay umuuqataa in shirkaduhu heleen nook ay tahay inay ka faa'iideystaan ​​oo ay sifiican uqabtaan, maxaa yeelay waxa la arkaayo ayaa ah in faa'iidooyinka ay lamidyihiin ama ay kafiicanyihiin siyaabo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Tim Cook wuxuu sii wadi doonaa inuu ku sharaddeeyo telecommuting faafida kadib